Maitiro ekumisikidza anotakura marongero e iPhone | IPhone nhau
Maitiro ekugadzirisa marongero anotakura e iPhone muSpain
Iva navo marongero eanoshanda Zvakanyatsogadziriswa zvakakosha kuti ukwanise kusevha internet kana kupinda pasocial network kana tisingabatanidzwe kunetiweki yeWiFi. Muzviitiko zvakawanda, marongero aya anogadziriswa otomatiki kana SIM kadhi yaiswa, asi zvingangoita kuti izvi zvicharasika nekuda kwedambudziko re software uye isu tichafanirwa kuzviisa zvekare, kunyangwe isu tichigona kutarisa chimwe chinhu kutanga.
Kana, nekuda kwechikonzero chero chipi zvacho, iyo data iri muZvirongwa / Nharembozha / Nhare yedata nhare inonyangarika, kutanga pane zvese isu tichaongorora kana paine iripo opareta yekuvandudza. Iwo marongero eanoshanda anofanirwa kugadzirisa otomatiki, asi isu tinokwanisa kutarisa kuti tivandudzwe nenzira imwecheteyo yatinotarisa kuti ive yekuvandudza kweIOS, nekuenda kuZvirevo / General / Ruzivo Kana paine yekuvandudza, iwe uchaona mufananidzo senge unotevera.
Ramba uchifunga kuti, paunobata kugadzirisa, marongero eanoshanda uye kubatana kucharasika kwechinguva, asi haina kuwanda uye chinhu chakajairika. Basa racho rinofanira kutangwazve.
Kana nezvose zviri pamusoro dambudziko rikaramba riripo, ipapo isu tichaenderera kune yako kunyorwa kwemanyorerwo. Iri rinotevera runyorwa rinoshandawo kumidziyo isiri iyo iPhone, saka iyo data ndeye generic. Iyo APN (Access Point Zita) muIOS yakafanana neAccess Point uye ndizvo zvatinofanira kuisa muInternet Sharing chikamu kana tichishuva (hazvitomborwadzi kuimisa).
10 Happy Mobile
11 Sravana Sameeralu Serial XNUMXth Mobile Republic
Chiteshi cheMMS: 8080
Rudzi rwekusimbisa: PAP
Rudzi rweAPN: "default, supl, mms" (isina makotesheni)
Zita: Vodafone ES
Rudzi rweAPN: default
APN Rudzi: Internet
Sravana Sameeralu Serial XNUMXth Mobile Republic
Compress data: Akaremara
Compress misoro: Akaremara
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekugadzirisa marongero anotakura e iPhone muSpain
Uye iyo 2G sarudzo yekuonekwa zvakare pane yangu iPhone 6 neVodafone?
Mhoro TASIO. Iwe unoreva sarudzo, handiti? Ndicho chinhu chavanofanira kutumira. Kana wako opareta asingabvumirane, haugone kutoti ukazviita kuburikidza nejailbreak.
Mhoroi ipapo, ndine dambudziko, pese pandinobatanidza yangu iPhone 6 kuenda kuTunes zvinondiudza kuti pane update kubva kune anoshanda, ini ndinogara ndichigadzirisa asi inoramba ichioneka pese pandinobatanidza iyo, iyo iPhone inosunungurwa kubva kufekitori uye Ini ndinoshandisa Movistar chip kubva kuArgentina. Kubva ndatotenda zvikuru kwazvo
Mhoroi, Pablo. Chinhu chekutanga chandingaite kutarisa neako opareta. Zvamunotaura ndezvekuti chero iOS inoona kuti pane inogadziriswazve kana kuti mushandi wako haaone zvakanaka kuti watovandudza.
Unogona kuyedza zvinhu zvakati wandei, asi chimwe chazvo ndechekudzorera kubva pakutanga uye ini handizive kana zvakakodzera. Chinhu chimwe chandingaite ndechekuti, nguva inotevera iyo yekuvandudzwa painowoneka, iwe unogadziridza, vhara zvese zvinoshandiswa kubva mukuita zvakawanda uye kumanikidza kutangazve (tanga bhatani + kurara kusvikira iwe waona apuro). Kumanikidza kutangazve ndiyo kadhi yemusango yatinayo kana tiine zvipembenene zvidiki zvisina mhinduro iri nyore.
Chinyorwa chakanaka, asi iwe wakashaiwa iyo data yekupinda kuti umise Internet Kugovana
Ini ndinobva kuVodafone uye ndine airtelwap.es mune ese marongero (data, mms ...) Yakagadzirirwa ivo pachavo ...
Chikwata cheCommunication akadaro
Mhoro Kutenda nekutisanganisira. Isu takavandudza chimiro chedu chekuona muna Chikumi. Iyo chaiyo .Tuenti logo inogona kutorwa pano: http://corporate.tuenti.com/cdn/farfuture/KjA4pkFHAWsuAbTwzNBrjMo29HkI5Kvu_slCSyrjNtA/md5:01241880e41bf03e6c3397ab59f38713/files/static/Press_Kit.zip Ndatenda! blog.tuenti.com
Pindura kuKutaurirana Chikwata
Mhoro kuti uone kana paine munhu anogona kundibatsira kumisikidza talkcom apn pane iPhone 6
Elvia ortiz akadaro
Mhoroi, ndingawedzera sei telcel opareta kune iphone 4?
Pindura Elvia ortiz
Mhoroi ndinogadzirisa sei iyo proxy yefoni data pane iphone 6
Apple inotaurirana nemakambani ekugadzira iwo pamwedzi mubhadharo weApple TV
Isu takaedza audiomax HB-8A Bluetooth mahedhifoni